पार्टीको झण्डा होइन नेपाली झण्डा बोक्न सिकौ – Karnalipati
पार्टीको झण्डा होइन नेपाली झण्डा बोक्न सिकौ
देशमा भएका साना ठुला आन्दोलनमा युवाहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको छ । यो सवैलाई थाहा नै छ । हामी युवाहरुले हिजो पुष्पकमल दाहाललाई प्रचण्ड बनाएका हौं । अनि हामी युवाले केपी ओली बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनाएका हौं ।
लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्र ल्याउनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान युवाको नैं थियो । हिजो गणतन्त्र ल्याउने युवाले आज किन दलाल र भ्रस्टाचार विरुद्ध आवाज निकाल्न सकेका छैनांै । प्रचण्डको गल्ती होइन गल्ती हाम्रो हो । किन भने हामीलाई चुनाव सिद्धान्त प्यारो लाग्दैन तेती बेला पार्टी प्यारो लाग्छ । हजुर आफै भन्नहोस् गल्ती कसको छ । त्यसैले युवाहरुले हाम्रो होइन राम्रो मान्छेलाई मतदान गर्न सक्नुपर्छ । जब सब यो हाम्रो राम्रो सोचको विकास हुन्न तब सम्म हाम्रो देशको विकास हुने कल्पना पनि नराख्दा हुन्छ ।
देश विकासको मुख्य मेरुदण्ड भनेकै युवा हो । जबसम्म युवाले कुनै राजनीीतक दलको झण्डा बोक्छ तबसम्म देशमा कुनै पनि परिवर्तन हुने सम्भावना छैन । संसारका ठूला–ठूला देश विकास हुनुमा युवाहरु को ठूलो योगदान छ । हामी युवा भनेका देश निमार्णको मेरुदण्ड र्हौं । त्यसैले हामी युवाहरूले सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढेमा देशको विकास सम्भव हुनेछ । हामी सम्पूर्ण नेपाली युवाले कुनै पार्टीको झन्डा होइन नेपालको झण्डा बोकेर देश विकासमा लगाडि लम्कनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । पाटीको झण्डा बोकेर के पाइएको छ ? कत्तिको देशको विकास भएको छ ? युवाहरुले मनन गर्ने बेला आएको छ । अहिलेसम्म माओबादी, एमाले, नेपाली काँग्रेस र अन्य पाटीको झण्डा बोकेर युवाहरुले पाए एक पटक सोर्चौ त ?
कुनै पनि पाटी भन्दा पनि हामीले व्यक्तिलाई रोर्जौ र हामी सम्पूर्ण युवाले राम्रो व्यक्तिलाई साथ दिउँ अनि युवापुस्ताले भनेजस्तो समाजको परिवर्तन गर्न सकिन्छ । हामीले हरेक वर्ष तिर्नु पर्ने कर नेताको पेट पाल्न अनि कार्यकर्ता पाल्नका लागि तिरेका भने होइनौं हामीले तिरेको करको अव युवा पुस्ताले एक एक हिसाव माग्न जरुरी देखिएको छ । देशको विकास गर्नका लागि तिरेको हाम्रो करको सम्मान भएको छैन । हामीले तिरेको करको दुरुपयोग गरिएकोछ । अव हामी देश निमार्णमा लाग्ने युवाहरुले राम्रो काम गर्नेलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ तर अन्धभक्त एक बोतल मा हामी भुल्यौ भने समाज सकिन्छ नेताले भकारी भर्छ्न । देशमा कति जनताहरु भोकभोकै छ्न कति कतिले औषधि नपाएर मरेका छन् कति कति ले सरकारलाई हामीलाई बचा सरकार भनेर गुहार मागेका छन् । तर त्यस्ता नागरिकको गुहारलाई सुन्दैन यो नालायक सत्तामा बसेका चोरहरु अब युवा एक जुट भएर गाउँका छोटेलाल देखि देशका बढेमान सम्म रामधुलाई न गरि न हुने भो ।
पलाता कालिकोट कैलाली सम्पर्क मञ्चका कोषाध्यक्ष हुन